Xaraashka Bilyan ee Xaraashka TCDD ee TCDD | RayHaber | raillynews
Hometareenka16 Billion Lacagaha TCDD ee Dhunkashada Nolosha
05 / 12 / 2018 tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Lacagta 16 bilyan oo dhaawac ah
Hindisaha sharciga 'boorsada' oo ay la socdaan xeerarka la xiriira dhaqaalaha ayaa saadaalinaya isbadallo muhiim ah oo ku saabsan mowduucyo badan oo isugu jira mashruucyo mega ah illaa SOEs, Iller Bank ilaa degmooyinka
Qaar ka mid ah Shuruucdii iyo Xeerarkii-sharciga ee ay u soo gudbiyeen kuxigeenada AKP ee u gudbiyay Guddoonka Golaha Shacbiga weyni ee baarlamaanka markii wax laga badalay soo jeedinta ayaa waxaa baarayay afhayeenka. Waa kuwan qodobbada sare ee wax laga beddeley:
Qandaraaslayaashuhu waxay xaq u leeyihiin inay joojiyaan ama kala wareegaan taas oo ku xidhan oggolaanshaha maamulka si loo hubiyo in mashaariicda waaweyn iyo adeegyada guud ay u dhici waayaan iyadoo ay ugu wacan tahay kororka qiimaha lama filaanka ah iyo in meesha laga saaro cabashooyinka dhaca. Qandaraasyada la siiyay oo soconaya ilaa iyo taariikhda dhaqan galinta sharcigan waa la joojin karaa ama la wareejin karaa ama la wareejin karaa iyada oo kuxirantahay qoraalka qandaraaslaha iyo ogolaanshaha qeybta qandaraaska gudaheeda 60 maalmood kadib taariikhda dhaqan galinta sharciga. Xaaladdan oo kale, wareejinta shuruudaha ugu horreeya marka laga reebo shuruudaha raadinta joojinta iyo xayiraadaha wareejinta iyo ganaaxyada ka imanaya wareejinta looma adeegsan doono. Qandaraaslaha qandaraaslaha ayaa la joojiyaa ama dammaanadda qandaraaslaha waa la soo celin doonaa.
16 Bilyan-Waxyeelaynta TCDD NOLOSHA KISS
Tareennada State ee Jamhuuriyadda Turkey, ayaa xusay in ay maal-tareen-xawaaraha sare sano (TCDD) 2016 2.5 billion pounds oo ka mid ah khasaaraha sheet dheelitirka guud ee la khasaare ah ee sanadkii hore ayaa la gaaray 16.1 billion pounds. Maalgashiga TCDD, oo buuxiya baahida loo qabo kheyraadka leh kororka raasamaalka ee ay sameysay Wasaaradda Maaliyaddu si joogto ah iyo amaah xilli shisheeye / xilli dammaanad leh, ayaa lagu maalgelin doonaa wareejinta raasamaalka ee miisaaniyadda Wasaaradda Maaliyadda iyo Maaliyadda.
LACAG LA'AANTA KITS-KARIIMKA
Isbeddel muuqda ayaa sidoo kale loo saadaalinayaa Shirkadaha Ganacsiga Gobolka (SEEs), oo qaybtooda wax soo saarka ay sii yaraanayso maalinba maalinta ka dambeysa siyaasadaha khaldan ee dowladda, laakiin culeyska saaran Maaliyadda ayaa si joogto ah u kordha. Iyadoo la raacayo, SEEs ayaa midba midka kale amaahi doonaa. Tusaale ahaan, faa'iido ah khasaaro TOKI xilsaaray qaybinta xorta ah ee dhuxusha si ay qoysaska saboolka ah lacag si Turkey Dhuxul Enterprises amaahan kari lahaa.
BAYDHABKA BILAASH EE ILLER EE AKP MUNICIPALITIES
Sida ku xusan soo jeedinta, Iller Bank wuxuu u adeegsan doonaa 51 deeq ahaan inuu ku taageerayo hirgelinta is beddelka magaalooyinka ee maamullada degmooyinka, khariidadaha, qorshayaasha aagagga, kaabayaasha iyo mashaariicda dhismayaasha iyo maalgelinta howlaha dhismaha ee mashaariicdan.
AYAA UGU CAAWINAYA MADAXWEYNAHA MUQDISHO
Si loo xaqiijiyo mashaariicda maalgashiga ee ay u baahan yihiin degmooyinka, Madaxweynaha waxaa loo oggolaanayaa inuu u adeegsado kaalmooyinka loo qoondeeyay degmooyinka loo qoondeeyay miisaaniyadda Tayeynta Istaraatiijiyadda iyo Miisaaniyadda markii ay codsadaan degmooyinka.
TCDD ugu badnaan SEE
Sanduuqa TCDD 'Treasure' Chase!
Sharciga fuliyay tareenka ayaa kor u kacay
Dhibaatooyinka Tareenada Jarmalka
Maalgashiyada tareenka oo degdeg ah
Hay'adaha Dhaqaale ee Dawladda